Ogeysiis Dhakhtar: ma iska ilaalin kartaa cudurka coronavirus? iyo habka ugu fiican – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ogeysiis Dhakhtar: ma iska ilaalin kartaa cudurka coronavirus? iyo habka ugu...
Ogeysiis Dhakhtar: ma iska ilaalin kartaa cudurka coronavirus? iyo habka ugu fiican
La yaab ma leh in mid ka mid ah baaritaannada ugu caansan ee internetka hadda ah ay tahay qaabab looga hortago naftaada inay qaado cudurka coronavirus.
Tan iyo markii uu cudurku dillaacay, aragtiyo badan ayaa ku faafay internetka oo ku saabsan sida ugu fiican ee aad naftaada u ilaalin karto. Qaar ka mid ah aragtiyaha ayaa saldhig u ah xaqiiqda iyo sayniska; kuwa kale maaha.
Talada ugufiican – oo lagu dhexjiray cadaymaha sayniska – waa jahawareer jireed iyo nadaafad wanaagsan:
Ku dhaq gacmahaaga illaa 20 sekan iyo saabuun iyo biyo.
Dhaq gacmahaaga isla marka aad gudaha ku soo gasho.
Ha ku taaban wejigaaga gacmo dhaqaanin.
Ku hindhiso ama ku qufac unugyada isla markaana iska tuur isla markaana dhaq gacmahaaga.
U fiirso jeedinta jirka iyo talo keli ahaanta.
Dhammaan arrimahan hadda waa inay noqdaan nooga labaad ee inteena badan, laakiin muxuu yahay aragtiyaha kale ee wareegaya?
Waxaa muhiim ah in si cad loogu cadeeyo halkaan in wax kabadan oo daawo ah aysan ka bogsiin doonin ama looga hortegi karin cudurka.
Si kastaba ha noqotee, maqaal ay ku daabacday bishii hore joornaalka Shiinaha ee Cudurrada Cudurrada faafa, Ururka Caafimaadka ee Shanghai wuxuu ku taageeray isticmaalka fiitamiin C-ga sareeya iyadoo lagu daaweynayo dadka isbitaal la dhigay COVID-19.
Kooxda khibradda sare leh ee Xarunta Caafimaadka Dadweynaha ee Shanghai, halkaas oo bukaannada COVID-19 lagu daweeyey, ayaa soo sheegay in qaadashada ay ku jirtay 10,000mg ilaa 20,000mg maalintiiba muddo ah 7 ilaa 10 maalmood. Tani waxay aad uga badan tahay qiyaasta 75mg ee maalinlaha lagula taliyo, oo laga helo supple-supplements.
Qiyaastaas sare waxaa lagu siyay xididdo galmo ahaan toos ah xididka bukaanka, halkii laga isticmaali lahaa kuwa afka laga qaato.
Fitamiin C muddo dheer ayaa la ogaa inuu leeyahay saameyn antioxidant ah.
Ka hortagga sunta loo yaqaan ‘antioxidants’ ayaa loo baahan yahay si jirka loogu ilaaliyo isku dheellitirnaan caafimaad leh. Molecules-ka loo yaqaan ‘xag-jiryada xorta ah’ waxaa si joogto ah u soo saara jirka – badanaaba waa wax soo saarka hawlaha maalinlaha ah ee jirka. Kuwa xagjirka ah ee bilaashka ah waxay u baahan yihiin in laga takhaluso ama waxay dhaawici karaan DNA-gaaga iyo moleekuleyaasha kale ee muhiimka ah ee jirkaaga ku jira.
Infekshannada fayrasku waxay kordhin karaan tirada xag-jiryada xorta ah ee jirkaagu soo saaro, iyo antioxidant-ka sida fitamiin C ay muhiim u yihiin kala-baxa this. Isku dheelitirka taxaddarka ee u dhexeeya antioxidant-ka iyo xag-jiryada xorta ah waxay muhiim u yihiin nidaamka iska caabbinta caafimaadka leh.
Faytamiin C, sidaa darteed, wuxuu yareyn karaa dhererka infakshannada fayras sida hargabka haddii la qaato ka hor intaysan infakshanka dhicin. Si kastaba ha noqotee, lama cadeynin inuu ka hortagayo ama daaweynayo hargabka.
Daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in fiitamiin C-ga aad u sarreeya uu yareyn karo dhererka daryeelka degdegga ah ee bukaannada qaba cuduro kala duwan, oo ay ka mid yihiin oof wareenka.
Fikraddu waa in saameynta antioxidant ee fitamiin C ay yareyn karto bararka ay cytokines ku keento sambabaha.
Cytokines waa borotiinno yaryar oo la sii daayay oo qayb ka ah jawaabta kahortagga jirka ee cudurka coronavirus. Haddii jirku aad uga caroodo fayraska, sida lagu arkay qaar ka mid ah dadka da’da yar ee ku dhammaaday cisbitaalka, waxay soo saaraan cytokines aad u fara badan, taasoo horseedaysa “duufaan cytokine ah.”
Soo saariddan xad-dhaafka ah ee loo yaqaan ‘cytokines’ waxay keentaa caabuq xad-dhaaf ah sanbabada, taasoo horseedaysa dhibaatooyin neefsashada iyo xitaa dhimasho. Fikradda ayaa ah in infakshanka fitamiin C, oo si taxaddar leh loo ilaaliyo cisbitaalka, ay yareyn karto duufaanta cytokine oo markaa yareyneyso caabuqa iyo dhibaatooyinka sambabbada ee uu sababo coronavirus.
In kasta oo daraasadaha bilowga ah ee isticmaalka fitamiin-ka xad-dhaafka ah ee daawada xad-dhaafka ah ay muujinayaan natiijooyin rajo leh oo loogu talagalay bukaanka coronavirus ee ICU, waxaa muhiim ah in la xasuusto in waxyaabo badan oo kuwan ah ay yihiin aragti ahaan oo aysan jirin wax caddeyn ah in qaadashada fiitamiinnada C ee afka laga qaato ay kaa hor-istaageyso Infekshanka coronavirus wuxuu kugu dhacayaa meesha ugu horeysa.
Fiitamiin C waxaa badanaa laga helaa miraha liinta sida liinta iyo liinta, iyo sidoo kale khudaarta cagaaran ee madow sida broccoli.
Sheekooyinka ayaa ku faafaya khadka tooska ah, iyagoo dadka kula talinaya inay cunaan toonta badan si ay uga hortagaan cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’.
Fikradda ayaa ah in toonku uu ka kooban yahay walax loo yaqaan ‘shisheeye’, kaas oo, marka la cuno, loo beddelo xeryahooda ay kujiraan baaruuddu, howsha laga yaabo inay leedahay saameyn bakteeriyada ka hortagta.
Garlic muddo dheer ayaa looga isticmaalay dalal badan wax ka qabashada daawada lidka ku ah iyo ka hortagga cudurka prebiotic, waana il cunno caafimaad leh.
Daraasad lagu daabacay joornaalka Jundishapur ee Microbiology ee 2014 ayaa soo gabagabeeyey in toonku leeyahay qaar ka mid ah guryaha ka hortagga bakteeriyada – ka hortagga bakteeriyada, oo aan la mid ahayn fayraska – laakiin cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo taageero tan.
Xaqiiqdi ma jirto wax caddayn ah in kordhinta qaadashada toontaadu ay yaraynayso fursadaha kugu dhici kara inaad qaadsiiso tan ama fayras kasta ama kaa caawin doonta inaad si kasta ula dagaallanto. Fikradda ah inay samayso waa war been abuur ah.
Bishii hore qoraal Facebook ah oo uu qoray dhakhtar japaanis ah oo been abuur ah ayaa fayras ku dhacey. Waxaa uu cadeeyay in cabitaanka biyaha 15-kii daqiiqo ee kasta ay afkaaga ka maydhayaan fayraska calooshaada halkaas oo ay caloosha caloosha ku dili doonto.
Boostada ayaa la wadaagey malaayiin jeer waxaana loo horseeday Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) twitter: “In kasta oo biyo lagu qubeysto ay biyo muhiim ah u tahay caafimaadka guud ahaan, kama hortagto infekshanka coronavirus.”
Waxaa jira caddeyn badan oo ah in biyaha la cabo ay muhiim u yihiin caafimaadka guud ee jirkaaga siyaabo badan, oo ay ku jiraan mindhicirka, kalyaha iyo caafimaadka maqaarka. Laakiin ma jiraan wax caddayn ah in cabitaanka 15-kii daqiiqadoodba ay yaraynayso fursadahaaga kugu dhici kara cudurka ‘coronavirus’.
Intaa waxaa sii dheer, fikradda ah inaad “ku maydho” malaayiin fayras ah calooshaada si ay u dhintaan aashitada caloosha ayaa gebi ahaanba ah wax la jeclaado.
Waxa aad hadda sameyn karto
Iyada oo ay faafistu sii socoto, waxaan baran doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan sida fayrasku noo saameeyo iyo tillaabooyinka ugu wanaagsan ee la qaadi karo si looga hortago. Isla mar ahaantaana, waxaa soo badanaya tirada tirooyinka wararka been abuurka ah ee ku saabsan, waana muhiim in aan dhammaanteen ka feejignaano arrintan.
In kasta oo nadaafadda iyo wax-ka-fogeynta ay weli muhiim tahay, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo ah agaasimaha WHO, wuxuu ku taliyey in shacabka ay tahay iney sameeyaan arimahan:
1.Cun cunno caafimaad leh oo nafaqo leh oo ka caawisa nidaamkaaga difaaca inuu sifiican u shaqeeyo.
2.Xaddid qamrigaaga oo iska ilaali cabitaannada sonkorta leh. Sonkorta iyo qamriga labaduba waxay ku leeyihiin saameyn xoog leh nidaamka difaaca jirka.
3.Sigaar ha cabin. Sigaar cabistu waxay kordhin kartaa halista aad u qaadi karto cudur daran haddii aad ku bukoonayso COVID-19 maxaa yeelay sigaar cabista waxay gacan ka geysataa dhibaatooyinka neefsashada.
Taasi waxay umuuqataa talo fiican.
Previous articledalka Japan oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah coronavirus Awgii
Next articleBoortooyada ingiriiska oo Maanta gaadhey dhimashadii ugu badneyn maalin kaliya Corona Virus.